Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Hadlay Siyaasadiisa Arrimaha Dibadda Ee Ku Waajahan Xiisada Mandaqada, Iran Iyo Sucudiga, Xaalada Dalka Iyo Waxyaabo Uu Ku Faannay Taariikhdiisa | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Hadlay Siyaasadiisa Arrimaha Dibadda Ee Ku Waajahan Xiisada Mandaqada, Iran Iyo Sucudiga, Xaalada Dalka Iyo Waxyaabo Uu Ku Faannay Taariikhdiisa
Waxa uu ka dareen celiyay Dhaliilaha Musuq Maasuq, Maamul-xumada, Calaaddarada. Eexda iyo Arrimaha Boogta Ku Xukuumaddiisa
Fadhiga Labada Gle ee Baarlamaanka Somalialnd
Hargeysa(ANN) “Waxa sharaf iyo maamuus ii ah in aan sannadkii 6aad hor imaado aqalka Baarlamaanka Somaliland ee Guurtida iyo Wakiiladda oo aan ka hor jeediyo khudbad sannadeedka Dastuuriga ah. Mudanayaal iyo Marwooyin, waxa marag ma doon ah in Xukuumadda aan gadh-wadeenka ka ahay xaqiijisay is-beddel laxaad leh iyo horumar balaadhan oo la taaban karo.
Siyaasadda Arrimaha Dibedda, Wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya, Diiwaangelinta iyo Doorashooyinka, Qiima-dhaca Shillinka Somaliland, Adkaynta Nabadgelyada, Maamul Wanaagga, Garsoorka iyo Cadaaladda, Siyaasadda Arrimaha Dibadda.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Waxaannu dardargelinaynaa ambaqaadka wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya. Si looga gun gaadho wada hadalada labada dal u dhexeeya, waxaan ku baaqayaa in gogosha la balaadhiyo, dalal laysla gartayna ay goob joog ka noqdaan. Dhinaca kale, waxaannu soo dhaweynaynaa dedaalada Beesha Caalamku ugu jirto sidii Soomaaliya nabad loogu soo dabaali lahaa, isla markaana dawlad adag loogu dhisi lahaa dabayaaqada sannadka 2016-ka. Hasayeeshee, waxaannu dunida u caddaynaynaa in Somaliland tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ku midoobay Nidaamka Federaalka.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Sida aad la socotaan waxay xukuumadaydu xaqiijisay taariikhda dalkan markii ugu horaysay, in la sameeyo diiwaangelin u gaar ah Aqoonsiga iyo Sugidda Dhalashada Muwaadinka Somaliland. Diiwaangelinta oo ahayd mashruuc Qaran oo culus ma jirin cid inaga caawisay gebi-ahaanba, dhammaan dhaqaalihii ku baxay waxaa bixisay Dawladda. Waxaa sharaf ii ah in aan maanta idiinku bushaareeyo in aynu ku guuleysanay farsamo ahaan iyo tayo ahaanba sidii loo diiwaan gelin lahaa Muwaadiniinta Somaliland 70%.
• in aan dalkan u horseedo horumar, haybadiisana aan kor u qaado.
• in aan ka tago dhaxal aan duugoobin iyo dhito aan go’in. in aan suurto geliyo Doorasho Xor iyo Xalaal ah, taas oo ku qabsoonta xiligii loogu talo galay eebe idamkii.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Dalkasta oo dunida ku yaal wuxuu leeyahay calan iyo cumlad u gaar ah. Lacagta Qarankani uu leeyahay waa Shillinka Somaliland. Waxaa hubaal ah in lacagteenii uu ku yimi qiimo dhac, ka dib markii ay suuqa iyo seyladda ganacsiga ku cidhiidhyeen lacago qalaadi. Taasi waxay keentay in lacagteenii ay soo ururto isticmaalkeedu. Haddaba, si aynu uga badbaadno dhibaatooyin siyaasadeed, dhaqaale iyo lacagteena oo sii qiima beesha. Waxaa xukuumadayda ka go’an in ay xaqiijiso arrimahan:
6. Waxaannu samaynay xeerar muhiim ah, kuwaas oo loogu talogalay in ay xakameeyaan xatooyada xoolaha ummadda, isla markaana sugaan Nidaamka Hufnaanta iyo Dib-u-habaynta Maamulka Maaliyadda, Public Finance Management (PFM)
12.Qiimaynta Garsoorayaasha Dalka iyo dardargelinta Guddida Cadaaladda.